CIN Khabar स्कुल विभागको नेतृत्व बहसले पार्टी होइन गुट बनाउँछः घनश्याम भुसाल
स्कुल विभागको नेतृत्व बहसले पार्टी होइन गुट बनाउँछः घनश्याम भुसाल नेकपा भित्र विचारको बहस कि गुटको चिन्ता
सीआईएन बुधबार, साउन ८, २०७६, ०५:२५:००
हाम्रा केहि नेताहरुलाई स्कुल विभागको नेतृत्व पाएपछि मैले आफ्नो हिसाबले सकुलिङ गर्छु र नयाँ विचारको ग्राउण्ड तयार गर्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यसरी त पार्टी बन्दै बन्दैन । त्यसरी बन्ने भनेको गुट मात्रै हो ।
स्कूल विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी कस्लाई दिने भन्ने विषयले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको भित्र वैचारिक बहस शुरु भएको छ । यसले नेकपा एकताको दिगोपन माथि शंकाको सुविधा थपेको विश्लेषण पनि भईरहेको छ । नेकपा भित्रको पछिल्लो विवाद्, वैचारिक बहस कि पदीय भागबण्डाको अल्झन् ? साथी राजन रुचालले नेता घनश्याम भुसाललाई सोध्नुभएको छ ।
तपाईले स्कुल विभागको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यहाँ सिद्धान्तको प्रश्न चाँही छैन । स्कुलको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने कुरा छ । तर त्यसका पछाडीको कुरा चाँही त्यस्तो हुनसक्छ । कि, भावी दिनमा विचारको कसरी ब्याख्या गर्ने भन्ने कुरालाई केन्द्र गरेर त्यसमा छिनाझप्टी भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ ।
तर स्कुल विभागको नेतृत्वमा को आउने भन्ने कुराले नेकपाको भावी दिनको विचारको बहसलाई निर्दिष्ट गर्छ र ?
त्यो नहुनु पर्ने हो । त्यो एकदमै गलत कुरा हो । किन भने, जो सुकै हुँदा पनि उसले गर्ने भनेको त पार्टीले निश्चित गरेको विधी अन्तर्गत पार्टीले निश्चित गरेका एजेन्डाहरुमा स्कुल चलाउने हो । त्यसो गर्दाखेरी चाँही त्यहाँ व्यक्ति जो सुकै भएपनि हुनु पर्ने हो । तर त्यसका पछाडी चाँही, मलाई नै यो चाहिन्छ भनेर गरिने दाबी चाँही राम्रो विधी होईन । राम्रोसँग पार्टी चलाउने तरिका होईन ।
त्यसो भए देखि चिन्ता चाँही कहाँ निर होत ? स्कुल विभागको नेतृत्व गर्ने नेताको विचार पार्टीमा हावी हुन्छ कि भन्ने हो ?
त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता चाँही हो । जब विधी कमजोर हुँदै जान्छ, व्यक्तिका इच्छा, आकांक्षा र संकल्पहरु हाबी हुँदै जान्छन् । विधी कमजोर पार्ने र व्यक्तिहरु अगाडी आउने एकखालको प्रवृति देखा पर्र्दैछ, यसले हाम्रा नेताहरुलाई त्यता तर्फ धकेलिरहेको हुनसक्छ । जुन कुरा गलत हो । यसैपनि पार्टीको स्कुल चलाउनका लागि बढि को योग्य हो भनेर, पहिले योग्यताको मापदण्ड तयार गरेर मान्छेको छलफल गर्न पाएको भए, मापदण्डले मान्छे खोज्थ्यो । अहिले त मान्छे खोज्ने त्यसपछाडी उसले मापदण्ड बनाउने विधीबाट हामी जान खोज्दै छौं, यो कुरा गलत भईरहेको छ ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भित्रको विचारमध्य कुन विचारलाई स्कुल विभागले बोक्ने भन्ने कुराले पनि अप्ठ्यारो बनाएको हो कि भनेर शंका गर्न पाईने कि नपाईने ?
तपाईले भनेको कुरा साँचो हो । त्यसरी शंका गर्न सकिने ठाउँ बन्यो । किनभने यो बीचमा जसरी जनताको जनबाद भनेको के हो ? २१ औं शताब्दीको जनबादसँग कत्तिको मेल खान्छ अथवा जनताको बहुदलीय जनबादसँग कत्तिको मेल खान्छ भन्ने हिसाबले जुन कुराहरु बाहिर प्रचारमा आए । ति कुराहरु असाध्यै सतही रुपमा प्रचारमा आए । जसका कारण हाम्रा केहि नेताहरुलाई स्कुल विभागको नेतृत्व पाएपछि मैले आफ्नो हिसाबले सकुलिङ गर्छु र नयाँ विचारको ग्राउण्ड तयार गर्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यसरी त पार्टी बन्दै बन्दैन । त्यसरी बन्ने भनेको गुट मात्रै हो । एकजनाको भाषामा भन्ने हो भने त्यसरी बन्ने गिराह मात्रै हो ।
जनताको जनबाद नेकपाको नयाँ सिद्धान्त वा विचार हो भनिसकेपछि जबज छोड्दैनौं भन्नेहरुलाई स्कुल विभागको नेतृत्व दिंदा झन् खतरा हुन्न र ?
हामी दुईटा ठुला स्कुलहरुबाट यहाँ आएका छौं । एउटा जबज र अर्को २१ औं शताब्दीको जनबाद् माओबाद भन्ने हो । यसका बीचमा आज हामी दुवैको सारलाई समेट्न सक्ने गरि जनताको जनबादको सहमतिमा पुगेका छौं । त्यसो हो भने हामीले त यसैलाई बुझ्नु पथ्र्यो । जनताको जनबादको ब्याख्यामा लाग्नु पथ्र्र्यो । त्यतापट्टी ध्यान छोडेर आ–आफ्नै सिद्धान्तका कुरा गर्नु राम्रो भएन । एकताबाट लिनु फाईदा लिईसकियो । सत्तामा पुगिहालियो, मन्त्री प्रधानमन्त्री बनिहालियो अब यो काम छैन भने जस्तो हुनजान्छ । यसरी यो पार्टीको इतिहासमा धोका हुन्छ । जनताका अगाडी गरिएको बाचामाथि धोका हुन्छ । यस्तो कच्चा काम हामीलाई गर्न सुहाउँदैन । यत्तिको जिम्मेवारी भएका पार्टीका नेताहरुलाई यस्ता कच्चा कुरा गरेर हिंड्न सुहाउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाँही ।
घनश्याम भुसाल नेकपा भित्र विचारको बहसमा खरो उत्रिने नेता, वैचारिक नेतृत्व गर्ने नेता तपाईलाई स्कुल विभागको नेतृत्वका लागि चाहना भएन ?
मेरो चाहना छ । चाहना मात्रै वास्तबमा मेरो दाबी पनि छ । तर अरु साथीहरु चाँही त्यसका लागि जसरी लडभीड गर्दैछन्, यो लडाईले म आफैं जिल परिसकेको छु । मेरो भनाई, आजको स्कुलका एजेण्डा के हुन्, त्यसको प्रक्रिया के हो, भनेर छलफल गरौं । म त्यसको ब्याख्या गर्छु । मैले ब्याख्या गरेको एजेण्डा र प्रक्रियाले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा पुराउँछ भन्ने लाग्छ भने म नेतृत्व लिन तयार छु । यदि अर्को कोही कमरेडले मेरो भन्दा राम्रो गर्छु भन्नुहुन्छ भने स्कुल विभाग उहाँले चलाउनुहुन्छ । मेरो दाबी यता तिर हो । तर अहिले विषय मेरो दाबी भन्दा अन्तै गएको छ ।
तर त्यो प्रतिस्पर्धामा तपाईको आवाज त निकै सानो सुनिएको छ । किन ?
विचारको कुरामा बलियो हात्तीले जितेको जस्तो होईन । अहिले जसरी हामी निर्णय गर्दैछौं । जसरी सोंच बनाउँदैछौं, यो सोंचबाट राम्रो स्कुलिङ हुँदै हुँदैन म ढुक्क छु । अहिले सोंचले बनाउने पार्टी भनेको पार्टी हुँदैन, गुटै मात्रै हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ८, २०७६, ०५:२५:००